Fitifirana teny Anjanahary : « Afaka mitory ireo fianakaviana », hoy ny talen’ny polisy
Miteraka olana eny Anjanahary amin’izao fotoana izao milasika ilay voalaza ho jiolahy lavon’ny polisy teny an-toerana, andro vitsy lasa izay.
Nanatanteraka hetsika ny mponina teny an-toerana omaly, ka teo anoloan’ny paositry ny polisy no nanaovan’izy ireo izany. Milaza ireo mponina fa tsy jiolahy ilay maty voatifitra. « Nitifitra ilay jiolahy ka namaly ny polisy ka nitarika tamin’izao fahafatesana izao », hoy kosa ny avy amin’ny polisy.
« Mpiasan’ny orinasa iray eny Ankorondrano i Tafitamanana Lemitovo. Nandritra ny 10 taona izy izay no niasa tao. Rehefa voasambotra izy ireo ny alin’ny 24 jona, raha nisotrosotro dia navela handeha hody. Vao lasa anefa izy, dia notifirina ka izao maty izao. Tsy hita daholo taorian’izay ny kirarony, na ny peratra teny aminy sy ny vangovangony sy ny findainy ihany koa », hoy Ramanampiarisoa Benedicte, vadin’ny maty.
« Misy foana ny famotorana mikasika ireny raharaha mahafaty olona ireny. Ny polisy ihany koa tsy tongatonga foana teny, fa nanana fampitam-baovao matotra tsara. Na izany aza, afaka mametraka fitoriana ireo fianakavian’iilay olona voakasika. Ato anivon’ny polisy ihany koa dia hijoro tsy ho ela ny polisy hanara-maso ny asan’ny polisy. Miandry ny didy manendry ireo tompon’andraikitra amin’izany ireo olona ao anatin’io rafitra io, raha ny fahalalako azy », hoy ny komisera Velontsara Marcel, talen’ny famotorana eo anivon’ny polisy.
« Isan’ireo nanafika ilay teratany Soisa teny amin’ny kaoperativa Vatsy Ambodivona ity lehilahy maty ity. Raha vonon-kamono ny polisy dia tokony ho faty avokoa ireo olona efatra nosamborina tamin’io fotoana io. Roa lahy izy ireo no nitsoaka nihazo ny elakelan-trano. Tsy vitan’izay fa mbola nitifitra ihany koa, ka izay no nahatonga ny fifampitifirana. Mbola karohinay io namany io hatramin’izao », hoy ny lehiben’ny hery vonjy taitra eo anivon’ny polisy (Gir).